Anjozorobe : Nodoran’ny dahalo ny trano ary lasany ny omby – Midi Madagasikara
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2020 → juillet → 21 → Anjozorobe : Nodoran’ny dahalo ny trano ary lasany ny omby
Anjozorobe : Nodoran’ny dahalo ny trano ary lasany ny omby
Nitrangana fanafihan-dahalo mivaivay indray mantsy tao amin’ny kaominina Fieferana Marovazaha ny faran’ny herinandro teo. Dahalo maromaro mirongo basy no nandroba fananan’olona tao an-toerana. Tsy vitan’ny nandroba anefa izy ireo fa mbola nodorany izay tsy zakany.
Araka ny fampitam-baovao azo avy any an-toerana dia tokony ho tamin’ny fito ora hariva teo no tonga nanafika tao amin’io tanana io ireo dahalo am-polony maro. Voalaza fa nirongo fitaovam-piadiana ireto farany ary namantana avy hatrany tamina tokatrano iray teo an-toerana. Poa-basy sy tsioka kiririoka toy ny mahazatra no nentin’izy ireo mampitahotra ireo mponina ka tsy nisy sahy nivoaka. Tetsy andanin’izay ihany kosa, namantana avy hatrany tany amin’ny valan’omby izy ireo ary namoaka ireo omby. Mitotaly 16 no lasa tamin’io fotoana io. Tsy vitan’io fangalarana omby io ihany anefa fa mbola nodoran’izy ireo tsy tam-pisalasalàna mihitsy ireo zavatra sarobidy nananan’ity fianakaviana ity ary tsy zakan’izy ireo, toy ny tranon-kisoa, izay mbola nisy an’ireo biby fiompy ireo tao anatiny, ny tranon-tsarety ary fitaovana iray fitotoana vary eo an-tanana. Tao anatina poabasy hatrany moa no nitsoahan’ireto farany, izay entin’izy ireo hampitahorana ihany koa izay olona sahy mibahana ny lalany. Taorian’io vao afaka niantso mpitandro filaminana ireo lasibatra.
Manao sesilany tokoa ny resaka tsy fandriampahalemana any amin’iny distrikan’Anjozorobe iny, raha ny tsapa tato ho ato. Vao tsy ampy herinandro akory mantsy izay no nisian’ilay vono olona mahatsiravina nitranga tao amin’ny fokontany Kamanja, kaominina Anjozorobe ka nahitàna ny fatin’ilay lasibatra nifatotra tongotra aman-tanana ary notsindriana vato tao anaty rano dia izao nisiana fanafihan-dahalo izao indray. Tsiahivina ihany koa fa mbola samy miandry ny tohin’ilay raharaha nahavoarohirohy zandary voalaza ho nanolana ankizivavy tany amin’iny kaominina Amboasary ihany koa ny rehetra amin’izao fotoana izao.